मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रिर्सोटमा एक रातको बिल तीन लाख ! कोको गएका थिए ? - ramechhapkhabar.com
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रिर्सोटमा एक रातको बिल तीन लाख ! कोको गएका थिए ?
आफूले भनेकै सचिव पाएपछि शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री सचिवसहित रिर्सोटमा पुगेको समाचार अहिले भाइरल भएको छ । काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरभित्र रहेको प्रकृति रिसोर्टमा शुक्रबार साँझ झाँक्रीले मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलाललाई लिएर बास बस्न पुगेको समाचार भाइरल भएको हो ।